Paris 2024 - La France en Birmanie
ကြိုဆိုခြင်း > ပြင်သစ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး > ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မူ > Paris 2024
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကာလ ၁၉၂၄-ခုနှစ်တွင် ပါရီမြို့၌ အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်များကို ကျင်းပခွင့် ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ထိုပွဲတော်များကို အသစ်တဖန်ပြန်လည်ကျင်းပခွင့်ရခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွက် များစွာဂုဏ်ယူဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်။ ထိုအောင်မြင်မှု့သည် အိုလံပစ်အားကစားစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ယဉ်ပြိုင်ခြင်း ကြောင့် လှပစွာရရှိလာသည့် အောင်မြင်မှု့များဖြစ်သော ပါရီမြို့ တွင် ၂၀၂၄-ခုနှစ် နှင့် ၂၀၂၈-ခုနှစ်တွင် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် မြို့တို့တွင် အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်များကို ကျင်းပခွင့်ရရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ထိုအောင်မြင်မှု့သည် ပါရီ ၂၀၂၄ အဖွဲ့ နှင့် အဖွဲ့တည်ထောင်သူများ ၊ ပြင်သစ် အားကစားအဖွဲ့များအားလုံး နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များ ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ ၊ ပြင်သစ် ပြည်သူလူထု ၊ ပြင်သစ် သံတမန် ကွန်ယက် နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ ပြင်သစ်ကျောင်းများ၏ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြိုးပမ်းမှု့များဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
It is with immense honor that France will be able to host the 2024 Olympic Games, 100 years after the last games in Paris took place in 1924. Suchavictory is only reinforced by the amount of winners involved: Paris 2024, L.A. 2028, and of course the Olympic spirit itself.
This victory wasacollective undertaking that fully mobilized the Paris 2024 team, all of its founding members as well as the entire French sporting community, but also economic and non-government actors, the French public and the French diplomatic and educative network abroad.